Diyopost.com :: निर्मला हत्याप्रकरण : हिरासतबाट दिलिप विष्टको बयान,‘प्रहरीले पानीपट्टि लगाएपछि ऐया..भनेर कराएँ' निर्मला हत्याप्रकरण : हिरासतबाट दिलिप विष्टको बयान,‘प्रहरीले पानीपट्टि लगाएपछि ऐया..भनेर कराएँ' - Diyopost.com
निर्मला हत्याप्रकरण : हिरासतबाट दिलिप विष्टको बयान,‘प्रहरीले पानीपट्टि लगाएपछि ऐया..भनेर कराएँ’
काठमाडौं, २२ भदौ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि निर्ममता पूर्वक हत्या भयो । सोही हत्या प्रकरण पछि आक्रोशित स्थानिय बासिन्दाले नेपालको राज्य सत्तालाई नै तरंगित बनाइदिए । प्रहरीले बलात्कार र हत्यामा समलग्न रहेको भन्दै मानसिक सन्तुलन गुमाएका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेपछि स्थानिय बासी झनै आक्रोशित बने । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले कञ्चनपुरकै दिलिप सिंह विष्टलाई पक्राउ गर्यो । गत भदौ ३ गते पक्राउ परेका विष्टलाई प्रहरीले चरम यातना दिएको खुलाशा भएको छ । मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको भनिएका दिलिपले प्रहरीले आफूलाई चरम यातना दिएको बताएका छन् । दियोपोस्टलाई प्राप्त अडियोमा उनले प्रहरीले आफूलाई पानी पट्टि लगाएर पिटेको समेत खुलाशा गरेका छन् । हिरासत भित्रै रहेका विष्टसँग गरिएको एक्सक्लुसिभ कुराकानी दियोपोस्टले यहाँ प्रकाशित गरेको छ : सम्पादक
नमस्ते के छ हालखबर ? तपाईं हिरासत बसेको कति दिन भयो ?
ठिकै छ सर । मलाई भदौ ३ गते देखि म हिरासतमा छु । कतिवटा चिठी दिएको छ ।
प्रहरीले दिएको तपाईसँग के कागज छ देखाउनुस त ?
केही लेखेको छैन सर एउटा कागजमा लेखेको थिए । त्यो कापी नै गायब गर्यो, त्यसमा एउटा निवेदन छ सर ।
यहाँ केही लेख्नुभएको छ तपाईले ?
लेखेको छैन सर । पुलिस सरले लेख्याछन् ।
तपाईलाई पुलिसले दिएको केही पुर्र्जी छ ?
पुर्जी लग्यो । छ…छ..छ..(प्रहरी)
तपाईलाइ अनि खानपिन के छ ?
भात मिलेको छ हजुर, कहिले साग मिल्छ । हिजो अमलेट बनाथ्यो अण्डा भुजिया । हिजो रोटी मागेको थिए, तन्दुरी त पाईएन । । साँझ रोटी विहान भात राम्रो हुन्थ्यो पाइएन । अण्डाभूजी पाए हुनथयो ।
अरु पानी पिउन, राति सुत्न ठिकठाक छ त ?
ठिक छ सर ।
औषधी खाँदै हुनुहुन्छ ? डक्टरले माया गर्नुहुन्छ ?
घरको मान्छे को आउनु भाछ ?
कोही आएन हजुर । भतिजि आएकी थिइन् । उसँग मन मिल्दैन । खुट्टाको खच्याहटमा सडाउने दबाई हालेर गई । घरमा मनमुटाव भएको थियो । घरको अंश अपुतालीमा खान चाहान्थे । तिनिहरुसंग मन मिल्दैन । संयोग भनौ या किस्मत तिनीहरुसँगै भेट भयो ।
तपाईंहरु कति दाजुभाई ?
दुई वटा दाजुभाई हौँ। म भाई हो । मेरो दाजु हुनुहुन्छ । त्यही दाजुकी छोरी आएकी थिईन् ।
दाजु कहाँ हुनुहुन्छ ?
उतै वागफाँटा हो ।
तपार्इं कति पढ्नु भयो नि ?
आठ पास ।
के काम गर्नु हुन्छ नि गाउँमा ?
खेतीपाती गर्छु हजुर । बारी खन्ने आलु लगाउने, धान लगाउने, त्यस्तै काम गरिन्छ ।
छोराछोरी केही छैन हजुर । आफ्नै भिनाजुको टाउको फोडेको ९ साल जेल बसेर आएँ ।
निवेदनमा के लेख्नु भयो ?
उनीहरुले साउन १० गतेको घटना भन् भनेका थिए । मलाई केही थाहा छैन त्यो घटना । मलाई प्रहरीकोमा छोड्न मेरो दाई र बुवा आउनु भएको थियो ।
तपाईलाई कुटपिट पनि गरे ?
घाँटी हल्का दुखेको छ । मान्छे धेरै बोलेपछि म भाङ धतुरो खाने गर्थें । अब यहाँ चुरोट पनि खान पाएन त्यसैले बोल्न सकिदैन हजुर । धेरै बोलेपछि टाउको दुख्छ । केही प्रश्नहरुको उत्तर हल्काहल्का दिन सक्छु । त्यसपछि केही प्रश्नहरुको उत्तर दिन सकिन । त्यस्तै छ राति निन्द्रा पनि लागेन ।
३ गते समातेपछि कति दिन बस्नुभयो हिरासतमा ?
चार पाँच दिन त सियोर बसेँ हजुर ।
तपाईंलाई कुटे पनि हो ?
केही कुरा सोध्दै थिए । झापड चाँही हानेको थियो । कसैले ढाडमा हानेको पनि थियो । एक दुई किक पनि लाग्यो । हल्काहल्का दुख्यो । कान तानेको थियो । पानीपट्टी गरेका थिए हजुर ।
कस्तो पानीपट्टी भनेको ?
कुर्सी राखेर सुत भने, मान्छेको बीचमा फेरी हातमा खुट्टा राखे । रुमाल विच्छ्याएर नाकमा पानीको थोपा चुहाउने काम गरे । सास बन्द हुने भयो त्यही हो । मेरो बुबालाई बोलाउन सकिन्न सर ? मेरो बुवाको नाम कमलसिंह विष्ठ वार्ड नं. १९ वागफाँटा ठेगाना हो ।
मोबाईल नम्बर छ ?
मोबाईल नम्बर त सौगात होटल लेखे पनि हुन्छ त्यहाँ गएपनि थाहा हुन्छ । त्यहाँ पसलमा सोधेपछि उसले बताउँछ ठेगाना ।
कति बर्षको हुनुहुन्छ बुबा ?
बुवा ६०/७० को हुनुहुन्छ ।
तपाई के खानुहुन्थ्यो अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि ?
म बिँडि खान्थे , चुरोट सुर्ति खान्थे, गुटखासम्म खाना खाएपछि ।
कति खानुहुन्थ्यो ?
विहान एक चिलिम खान्थे सुल्पामा हालेर । साथीहरु खान्छन नि बसेर । आफुलाई नि एक चिलिम दिएभने खान्थे । अनि दिमागमा चढ्थ्यो अनि बोलिने भयो । त्यो नखाई बोल्न नसक्ने ।
अनि बोल्नु भा छ त ?
नबोलेर के गर्नु फेरी गुंगा मुर्गा भन्छन । कहाँ बुझ्छन त कुरा । कसुर केही छैन हजुर ।
के काम गर्नुहुन्छ ?
माटो खन्ने, ढुंगा बोक्ने, खेतिकिसानी । बारी खन्ने । बजारमा कार्टुनहरु गाडीमा हाल्ने । कार्टुन खाली गर्ने राख्ने । सय डेढ सय देखि लिएर पाँच सयसम्म कमाई हुुन्थ्यो । दशैको बेलामा दुई सो रुपयाँ गोजीमा हुन्थ्यो । दशैँमा खानु पर्छ नी । हल्का चटनी चाहियो । अल्लि बाहिर तिर गईयो भने तास खेल्नको लागि पनि हल्का चाहियो ।
त्यही पैसा कमाउने शिलशिलामा काम गर्न जान्थँे । एकदिन बाटोमा सिभिल ड्रेसमा आएका प्रहरीहरुले समातेर ल्याए । एउटा डट्पेन बरामद गरे । गल्ति केही छैन । दारु चरेस खान्थेँ । खानेबानी लागेको थियो । कसैलाई कुटपिट गरेको छैन । लुटपाट गरेको छैन । बलात्कार गरेको छैन । कसैलाई हातपात पनि लगाएको छैन । गालीगलौज पनि केही गरेको छैन । अब अरुहरुले के–के कुरा लगाए । कसैले दारु खान्छ, अम्बल खान्छ के–के भने । त्यो कुरा अलग छ । तर त्यस्तो खालको सामान पनि केही बरामद गरेको छैन । खल्तिमा केही भेटिएको छैन ।
काठमाडौँ ल्याएपछि तपाँईलाई केही कुटपिट गरे की ?
कुटपिट केही त छैन सँधै एक जना आएर सोध्छ –‘ओ भाई के छ, ठिक छ ? भन्छ अनि कापीमा प्रश्नहरु लेखेर सोध्छ । म जानेको उत्तर दिन्छु । स्कुल छोडीसके नआउने प्रश्नको उत्तर दिन म सक्दिन । त्यत्तिसारो लाटो र बुद्धु पनि म छैन । चारजनाले घेरेपछि एकजनाले यताबाट घोच्ने अर्कोले उताबाट हान्न पनि गर्छन् ।
तपाईंलाई कञ्चनपुरमा पल्टाएर नाकमा पानी चुहाउने काम कतिपटक भयो ?
चारपटकसम्म गरे हजुर । एक पटक सुत भन्दै प्रहरीले सोध्यो, ‘निर्मला पन्तको बयान कबुल गर भन्यो । मैले भने, ‘मलाई निर्मला पन्तको बारेमा थाहा छैन म त आफ्नो घर जान लागेको थिएँ ।
निर्मला पन्तलाई चिन्नुहुन्छ तपाईंले ?
कहाँ देख्ने हजुर ।
घर कहाँ हो कति टाढा छ तपाँईको घरबाट ?
खै कहाँ पो हो सर मलाई थाहा छैन । एक्स वाई जेड । म त आँखा अस्पतालको बाटोबाट आउँथे । त्यहाँ एउटा मोड थियो । आँखा अस्पताल, अञ्चल अस्पताल हुँदै जाने बाटो सबै भिडभाड थियो । मलाई सोध्यो, मलाई केही थाहा नभएपछि ‘आई डु नट नो’ भन्नु पर्यो ।
भारत पनि बस्नु भयो ?
हो । गुजरातमा बसे डेढ साल दुई सालजति बसेँ ।
तपाँईको नाकमा पानी हाले भन्नुभयो कति समयसम्म राखे ?
पानी हाले । शुरुमा कुर्कुच्चा समातेर माथिबाट पानी चुहाए । एकपटक सहेँ, दोस्रो पटक सम्म सहे । पछि फेरी पानी हाले सहन सकिन ऐया बाबा भनेर कराएँ । टाउको साह्रै गार्हो भएपछि बल्ल छोड्यो । केटीको गुलाम नहुनु भन्छन् । मेरो श्रीमती नै छैन ।
तपाईको खुट्टामा पैतालामा कुटेको छ कतै ?
छैन सर । कानमा पिटेको छ । अनि घाँटीमा पनि । स्मरण शक्ति घटाउदै छ । गलो बसिराछ । एउटा गलो, टाउको अनि बोल्न गाह्रो भईरहेको छ । यही ३ वटा समस्या छ । पेटमा पत्थरी जस्तो भएको छ । खाना पच्दैन । यहाँ कोलगेट पनि छैन । साबुन छैन । कोलगेट पनि सक्यो गोजीमा रुपयाँ हुँदैन । एकजना सर आउनु भाको थ्यो जिप्रकाको, उहाँले दुई सय रुपयाँ दिनुभयो । सक्किहाल्यो चियापानीमा । सुर्ती खान पनि दिँदैन यहाँ । दिसा गर्न पनि सिक्रि समातेर जानुपर्छ, ढोका लगाउन मिल्दैन । पिसाव गर्दा पनि त्यस्तै हो । ब्रस पनि छैन एकचोटी बाउले किन्दिन्छु भन्नु भाको थियो । अस्तिन आउनु भएको थियो । तँलाई दुई दिनमा छोडाएर लैजान्छु भन्नु भाको थ्यो । आफ्नो पिडा कसले बुझ्ने हुन् ।
यहाँ बस्ने प्रहरीले कस्तो गरेको छ ?
हजुर उहाँहरुले त राम्रै गर्नुहुन्छ ।
के दिनुहुन्छ खानको लागी तपाईहरुलाई ?
खुल्ला पानी दिनुहुन्छ । खै कहाँको पानी हो । सिल्ड प्याक वाला बोतलमा दिईदैन । म खराब पानी किन खाने ?बुबाले दुई तिन बोत्तल पानी दिएर जानुभएको थियो रे त्यो मसम्म आईपुगेन । जेलमा पनि विभिन्न किसीमका खानेकुराहरु ल्याईदिन्थे तर मसम्म आईपुग्दैन थियो । आफुले जानेको कुरा आफुले पनि भन्न पर्यो नि ।
गल्ति केही छैन । कसैमाथी जाईलागेको छैन । भतिजी भन्ने छे । त्यो पुलिसनी की माओवादी भन्छे । त्यसकी आमाले मेरो अपुताली खाउँला भनेका छन् । मेरी आमा पनि मरिन् । मेरी श्रीमती पनि छैनन् । मलाई मार्न चाहान्छन् । हान्न चाहन्छन ,मेरो सम्पत्ती खानको लागी । तिनीहरुको दुई दाजुभाई थिए । त्यस्तै भयो सर माफ गर्नुहोला । तर, म जाइलागेको छैन ।
ठीक छ यहाँ राम्रो उपचार भईरहेको छ । अब चाँडै नै निको हुन्छ अनि फर्कनुहुन्छ ।
सर बरु मलाई पानी पट्टी नगर भनिदिनुहोला । कानमा हान्ने पिट्ने नगरिदिनु भन्नुहोला है । हजुर कहिले आउनु हुन्छ ? बरु मेरो बुबालाई बोलाईदिएपनि हुन्थ्यो । सर खाना खाने बेला पनि वरिपरि बस्छन् कसैले अगाडीबाट हान्छन् अनि कसैले पछाडीबाट पुक्क हान्छन् किन हानिस भन्न मिलेन । यो जिप्रकाका मान्छे (महेश पाल) की के भन्दै थिए त्यो मान्छेबाट २ सो रुपैयाँ लिएको छु । मेरो बुवालाई हिसाब बताइदिनु होला ।
तपाईंलाई के चाहिएको छ ?
कोलगेट पनि छैन । चप्पल पनि छैन । भित्र लाउने स्याण्डो र तलको कच्छा पनि छैन ।
(विष्टलाई प्रहरीले दिएको यातनाको सन्दर्भमा बुधबार एक अधिवक्ताको धारणा प्रस्तुत गर्नेछौँ ।)
‘निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्छु’: भीम बहादुर पाल (अन्तरवार्ता)
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २१ औ अधिवेशनमा खुल्ला तर्फको केन्द्रीय सदस्यमा इन्जिनीयर समेत रहेका निर्माण व्यवसायी भीम बहादुर पालले ...
सपनाको संयोजन हो ‘जालिनी’: लेखक ध्रुवसत्य परियार (अन्तरवार्ता)
काठमाडौँ । मण्डला थिएटर यस्तो ठाउँ हो, जहाँ ध्रुवसत्य परियार र म सहरको भीडबाट अलग्गिएर ‘मेडिटेट’ हुन पुग्ने गर्छौं । ...
भोकै छु भन्ने नाममा ऊ भोकको मुद्दा कायम राख्न चाहन्छ, उसलाई भोकै छु भन्ने देखाउनु छ–प्रधानमन्त्री ओली(विशेष अन्तर्वार्ता)
काठमाडौँ, संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई विभिन्न तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन भएको आजै सात ...
‘गृहमन्त्रीलाई आइजीपिको फूली’ प्रकरण : मिडिया विज्ञ भन्छन्,‘भोली राष्ट्रपतिलाई विकिनी लगाइदिने?’
काठमाडौं । आइतबार राजधानीबाट प्रकाशित हुने एक साप्ताहिकले गृहमन्त्री राम बहादुर बादललाई ‘घटुवा गर्दै’ आइजीपिको फूली लगादियो । गृह ...
संयुक्त शैन्य अभ्यास : पूर्व ‘प्रधानसेनापति’को प्रश्न, ‘भोली भारत र पाकिस्तान युद्ध भयो भने… ?’
काठमाडौं, १७ भदौ । शक्रबार सम्पन्न प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेक सम्मेलनले गरेको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय ...
किशोर श्रेष्ठ भन्छन्,‘रवी लामिछानेले आफूलाई राजा महाराजा भन्दा चर्को ठाने’
जीवनको अन्तिम घडिमा रहेकी मेरी आमामाथि आक्षेप लगाइएको छ । मैले गरेको निर्णय प्रक्रियामा मेरी आमाको के दोष उहाँलाई आजै ...
‘छातीमा गोली छ, युद्धमा श्रीमती गुमाएँ तर हाम्रा नेताले २ करोड कमिशन लिएर सांसद बनाए’
प्रदेशसभा तर्फ सामानुपातिक सांसद चयनका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र भित्र निकै ठूलो विवाद भयो । शुक्रबार माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा ...
टानका अध्यक्ष नवराज दाहाल भन्छन्,‘पर्यटकमाथि हेलिकोप्टरको मनोमानी शुल्क रोक्छु’
ट्रेकिङ व्यावसायीहरुको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियशन अफ नेपाल (टान)को ३९ औं साधारणसभाबाट पुराना पर्यटन व्यावसायी नवराज दाहाल अध्यक्षमा ...
‘…त्यसो नभएको भए नेपालमा प्रचण्ड कमरेडलाई उछिन्ने को माइकलाल आउँथ्यो र ?’ अन्तर्वार्ता –२
माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको घोषणा गरेका पूर्व मन्त्री तथा प्रभावशाली नेता लोकेन्द्र विष्टले कम्युनिष्ट राजनीतिमा झण्डै ४० बसन्त पार ...